I-Android 7.1.1 Nougat ifika kwezinye izixhobo zikaGoogle | Iindaba zeGajethi
I-Android 7.1.1 Nougat ifika kwezinye izixhobo zikaGoogle
Amarhe malunga nohlaziyo olutsha lwezixhobo zikaGoogle zamva nje, iGoogle Pixel, ziyinyani kwilixa elidlulileyo xa kusayinwa iG enkulu isungule inguqulelo entsha ye-Android 7.1.1 Nougat yezixhobo zayo ezininzi. Ngeli xesha inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza ayongezi lutshintsho lukhulu kwimisebenzi yezixhobo, kodwa ukuba yongeza inkcukacha ebalulekileyo ngokhuseleko kwaye oko kukuthi isiziba siyongezwa ngezixhobo, uzinzo isixhobo siphuculwe.isistim kunye neentshukumo ezintsha zokuchukumisa zongezwa kwimodeli yamva nje eqaliswe yinkampani, iGoogle Pixel.
Zeziphi izixhobo eziza kufumana i-Android 7.1.1?
Eli xesha lubalulekile kuhlaziyo lokhuseleko ukongeza kuphuculo oluthile kwimpawu zeGoogle Pixel, ke kubalulekile ukuba elona nani likhulu lezixhobo lihlaziyiwe. Uluhlu alukude kakhulu kwaye ngokucacileyo zonke zizixhobo zikaGoogle:
Inguqulelo entsha ayikhululwa ngokukhululekileyo, Uhlaziyo kulindeleke ukuba lufikelele kubasebenzisi bezi zixhobo ngokuthe ngcembe kwaye nge-OTA Ke sukungxama ukuba unayo nayiphi na kwezi Nexus ezandleni zakho. Kwelinye icala, kukho ukhetho lokufaka inguqulelo entsha ngomfanekiso wefektri, kodwa ngenxa yoku kufuneka siyifake ngesandla kwaye ayifumaneki kubo bonke abasebenzisi, ukongeza, isixhobo kufuneka sisethwe kwakhona kwaye siza kulahleka idatha. Kungcono ukuba uqaphele kuseto kunye nokuhlaziya ngesiqhelo xa le nguqulo ifikelela kwi-smartphone.
Asikholwa ukuba le nguqulo intsha izakuthatha ixesha elide ukuyandisa, kodwa ngokuphuculwa kongezwe ngokwenkqubo yokhuseleko, siyathemba ukuba iyakuba yinto encinci kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Android 7.1.1 Nougat ifika kwezinye izixhobo zikaGoogle
Iimpawu ezintathu ezintsha ze-Android 7.1.1
I-Samsung Gear S2 ihlaziywa ngezinye zeempawu zeGear S3